မြန်မာPabedan, YANGON ရှိ Bar Boon (FMI Center) | Drecome
Bar Boon (FMI Center) | Pabedan, YANGON.
Bar Boon (FMI Center)
Western | Bakery | Café | Take Away | Live sport tv | Parking | English | Air conditioner | English Menu | Breakfast | Lunch | Dinner | Couples | Groups / Party | Tourists | Men | Woman
No. 380, Bo Gyoke Aung San Road, Pabedan Township, Yangon.
အနီးအနား Bo Gyoke Aung San မှတ်တိုင်4မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်
Bar Boon (FMI Center) သည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်မှာတည်ရှိ ပြီး မိသားစု (သို့) သူငယ်ချင်းများနဲ့ အေးအေး ဆေးဆေး စားသောက်လို့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Bar Boon ၏ကိုယ်တိုင်ထုတ် ကော်ဖီ အမျိုးမျိုးနှင့် အီတလီ နိုင်ငံ ထုတ် နာမည်ကြီး illy ကော်ဖီအမျိုးမျိုးတို့ကို သုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး လတ်ဆတ်တဲ့ရာသီပေါ် သစ်သီိးဖျော်ရည်များ ကိုလည်း ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
ဒါ့အပြင် ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး စားသုံးနိုင်သော Sandwich ၊ Waffle ၊ Cookies ၊ Brownie ၊ Cake စသည့် မုန့်မျိုးစုံကို လည်းစားသုံး နိုင်ပါသည်။
ခေတ်မှီဆန်းသစ်သော အပြင်အဆင်များ၊ မီးရောင် ဒီဇိုင်းများ ဖြင့် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ လှပစွာ တန်ဆာဆင်ထား သောကြောင့် လာရောက်စားသုံးသူများ အနေဖြင့် စတိုင်လ်ကျကျ စားသုံးရင်း ဓါတ်ပုံလှလှလေးများကို လည်း ရိုက်ကူးနိုင်ပါသေးသည့် အပြင် WiFi မှာလည်း Free ဖြစ်သောကြောင့် လာရောက်စားသုံးသူများ အတွက် အကြိူက် ဖြစ်စေမှာပါ။
ဝန်ဆောင်မှု မှာ အထူးပင် ကောင်းမွန် ပြီး ဖော်ရွေသော ၀န်ထမ်းများမှာ လည်း အင်္ဂလိပ် ဘာသာ စကား စကားပြောဆိုနိုင်သောကြောင့် နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည် များအတွက် အဆင်ပြေ ချောမွေ့ စွာ စားသုံးနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဒီဆိုင်လေးကတော့ Couple Dating များအတွက် လည်း အဆင်ပြေပြီး နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည် များ ၊ အဖွဲ့ လိုက်ပါတီ များ နှင့် မွေးနေ့ ပါတီ များ ကိုလည်း ဈေးနှုန်းသင့်တင့် စွာ ကျင်းပနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
ဒါကြောင့် Bar Boon ဆို်င်လေးသည် ကော်ဖီကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် ကောင်းသောနေရာလေး တစ်ခုဖြစ်ပြီး ထိုဆိုင်လေးကို သွားသည်အခါတွင် လည်း သင့်အတွက် စိတ်ကျေနပ်မှု များစွာကို လည်း ရရှိစေနိုင်မှာ အမှန်ဖြစ်ပါသည်။
Bar Boon ဆိုင်မှာလည်း သင့်အား အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှု ပေးရန် စောင့်ကြိုနေပါသည်။
Pineapple, Banana, Lime Juice
Mint, Pineapple, Lime Juice
Watermelon, Banana, Red Apple Juice
Seasons Bakery & Cafe (Parkson FMI Branch)
Parkson FMI Center, No 380, General Aung San Street, Pabedan Township
Ya Kun Coffee & Toast (FMI Center)
No.380, Level (1), FMI Centre, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp., Yangon.
KFC Myanmar ( Pabedan Branch )
No.375, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Township, Yangon